Sida loo Play DivX on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyadoo wax dhibaato ah
Aad dhib ku ciyaaro files DivX on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah? Adag hadlayay, DivX ma aha qaab weel multimedia, laakiin codec video ah. Sida file video ah, file DivX ah dhab ahaantii waa file AVI encoded la codec DivX ah. In kasta oo goobta rasmiga ah ayaa ku dhawaaqay Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waxay kugu taageeri kartaa AVI la DivX codec, waxaad weli ka heli qaar ka mid ah DivX files ku guuldareysato inay ciyaari qalabka. Malaha qaar ka mid ah video & audio dhimaya kuma haboona qalabka. Ha ahaatee, waxaad xalin karo dhibaatada si fudud by Wondershare Video Converter .
Just si toos ah qulquli files DivX si aad u Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, xitaa iyada oo aan diinta. The Wondershare Video Converter ha kartaa in aad shaqadan si fudud oo dhaqso sameeyo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay xiriiriyaan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah la PC iyo dhufatey "Stream" button, iyada oo aan sameeyo wax kasta oo kale dejinta gacanta. Tilmaan-bixiyahan waxa aad hoos ku tusi doona sida loo sii qulquli DivX in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ee loo maqli siman. Geedi socodka oo dhan waa kaliya qasabno yar oo sahlan. Ka hor inta aadan bilaabin fal, halkan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsigan.
Taageerada ilaa 150 qaabab file kala duwan, DivX ka mid ahaa.
Function Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli DivX videos in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Hawlaha kale ee sida edit, download, qoraaga iyo gubi DVD.
Xawaaraha diinta Superior badan oo dhan converters weyn oo ku saabsan suuqa.
Talaabada 1: Load files DivX in DivX si Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah video Converter
Haddii files DivX aad waa dhow yihiin, sida ugu fudud si ay u dajiyaan waa in ay si toos ah kuwaa oo ka soo PC in interface barnaamijkan ee. Haddii kale, waxaad riixi kartaa "Add Faylal ay" si ay u dajiyaan aad files DivX deegaanka.
Talaabada 2: Dooro Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah sida qalab webigu
Software Tani waxay si toos ah u ogaan karaa adiga oo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah sida qalab geeyo ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad u hubiso in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyo PC ku yaalaan shabakad isku mid ah. Markaasuu u baahan tahay in aad bedesho ah "Stream" tab, doortaan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah, oo ka dhacay button Stream ee geeska gacanta midigta hoose ee suuqa.
Daaqadda pop up ka, mouse ka badan video aad rabto in aad sii qulquli iyo riix "Play To TV" button. Dhowr ilbiriqsi ka dib, waxaad bilaabi kartaa inaad ku raaxaysatid video shaashadda weyn. Suuqa kala geeyo waxaa sidoo kale loo isticmaali karo sida uu furmo suuqa gacanta ku ah, halkaas oo aad ka qabsato kartaa mugga iyo hanaanka ciyaareed ama boodi in ay dhacdo hore ama kan ku xiga.
> Resource > Video > Sida loo Play DivX on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah